हुरीले दिएको त्यो घाउ, कसरी हुन्छ निको ? – HamroKatha
हुरीले दिएको त्यो घाउ, कसरी हुन्छ निको ?
उद्धार र राहतका लागि काठमाण्डौको एअरवेसमा नाईट भिजन हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखियो । नेपाल प्रहरीको थप टोली विहान ४:४५ वजे तत्कालका लागि राहत समाग्री लिएर घटनास्थलमा पुग्यो । रोगको महामारी फैलिन नदिन आवश्यक औषधीसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरियो । विद्युत र सञ्चार सेवा सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायहरु लागि परे । सोहि दिन साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हावाहुरीमा परि घाईते भएका सबैको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गर्यो । पीडितलाई वासको व्यवस्थापन भईरहेको छ । सामुहिक रुपमा खाना खाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हाम्रो कथा २०७५ चैत २१ गते १६:५१
आमाहरुले अब हुरीले लडाएको घरमा आफ्नो सन्तानको भविष्य खोज्नु पर्ने भएको छ । हुन त भविष्य त परको कुरा भयो । सबैभन्दा पहिला खाना खोज्नु पर्ने भएको छ । ओत लाग्ने छाना खोज्नु पर्ने भएको छ । आंग ढाक्ने नाना खोज्नु पर्ने भएको छ ।
गएको आईतबार साँझ बारा–पर्सामा असिना पानी र हुरिबतासले बबण्डरनैं मच्चायो । निमेष भरमैं घरहरु भग्नावशेषमा परिणत भए । हुरीले छानो उडाएर कहाँ पुर्यायो पत्तो छैन । घरभित्रको अन्नपात पुरियो । बिजुलीका पोलहरु ढलेर असरल्ल भए । टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भयो । सबैभन्दा दुःखको कुरा २८ जनाले ज्यान गुमाए । ६ सय भन्दा बढि शारिरीक रुपमा घाईते भए । मनका घाईते सबै नेपाली भए नि ।
आईतबार साँझ बारा–पर्सामा हुरिबतासले बितण्डा मच्चाएको केही छिनमै सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिवट आयो । सोही टिवटलाई आधार वनाएर संचार माध्यमहरुले खवर दिएर पछि घटनास्थलका आसपासका ठाँउ, निकाय र आम नेपालीले थाहा पाए । घटना जानकारीमा आउनासाथ सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित भएका थिए । उद्धारमा गम्भिर हुन र घाईतेको उपचारमा कुनै कमी आउन नदिन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आयो ।
उद्धार र राहतका लागि काठमाण्डौको एअरवेसमा नाईट भिजन हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखियो । नेपाल प्रहरीको थप टोली विहान ४:४५ वजे तत्कालका लागि राहत समाग्री लिएर घटनास्थलमा पुग्यो ।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार झापामा व्यस्त हुनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना सबै कार्यक्रम रद्द गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो । सरकारले तुरुन्तै राहत र उद्दारलाई तिव्रता दियो । रोगको महामारी फैलिन नदिन आवश्यक औषधीसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरियो । विद्युत र सञ्चार सेवा सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायहरु लागि परे । सोहि दिन साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हावाहुरीमा परि घाईते भएका सबैको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गर्यो । पीडितलाई वासको व्यवस्थापन भईरहेको छ । सामुहिक रुपमा खाना खाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
समग्रमा, घटना घट्यो । चोट लाग्यो । अब घाउलाई दुःख्न नदिने प्रयास जारी छ ।